Maalinta: Abriil 22, 2018
Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakir 23 Bilaash Bilaha Abriil
Dowladda Hoose ee Magaalada Diyarbakir, 23 April ee Gobanimada Qaranka iyo Maalinta Caruurta sababta oo ah adeegyada gaadiidka dadweynaha ayaa bixin doona bilaash. Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalo Weyn, 23 Abriil Awoodda Qaranka iyo Maalinta Caruurta sababtuna waa wadajirka dawladda hoose [More ...]
GAZİRAY si loo badbaadiyo labadaba Foundation iyo Fuel
Aasaaska Gaziray oo bixin doonta adeeg casri ah oo miyi ah oo ku habboon raaxada metro ee u dhaxaysa Başpınar iyo Oduncular ee Gaziantep, 21 Bishii Abril 2018, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, Wasiirka Caddaaladda Abdulhamit Gül, Guddoomiyaha Gaziantep [More ...]
Waxaan u Baahanahay inaan Qiimeyno Ganacsiga Ganacsiga ee Juqraafiga
Ars Dalkeennu waa buundo u dhaxaysa Aasiya iyo Yurub. Waxaan u baahan nahay inaan xaq u siino juqraafi ahaan. Waxaan u baahanahay inaan qiimeyno awooda ganacsi ee juqraafi. ” Arslan, Wasiirka Caddaaladda Abdulhamit [More ...]
Maanta taariikhda: 22 April 1924 506 Baarlamaanka XNUMX
Taariikhda Maanta 22 Abriil 1924 Waxaa la go'aamiyay in la iibsado qadka Anatolia oo leh sharciga loo yaqaan '506' ee Golaha Qaranka Turkiga. Iyadoo la raacayo sharcigaan, oo loo arko inuu bilow u yahay siyaasada wadooyinka tareenka, labadaba dhismaha dariiqooyin cusub iyo [More ...]